तपाइको मिल्ने विपरितलिंगी साथी छ भने, के त्यो साथी तपाईंको प्रेमी वा प्रेमिका हो ? – tvNepali.net
तपाइको मिल्ने विपरितलिंगी साथी छ भने, के त्यो साथी तपाईंको प्रेमी वा प्रेमिका हो ?
आजकल केटि साथी पनि थुप्रै हुने गर्दछन तर त्यो सम्बन्धलाई समाजले अर्कै नजरले पनि हेर्ने गर्दछ । तर तपाई पनि कहिले काही भ्रममा पर्न सक्नु हुन्छ कि उ तपाइको साथी मात्र होकी त्यो भन्दा माथी । किनकि तपाइँ उ साग आफ्नो सबै सुख-दुखका कुरा शेयर गर्ने गर्नुहुन्छ ।
PreviousPrevious post:विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने पहिलो भारतीय महिलाको बायोपिकमा आलिया
Next Next post:जिरिखिम्तीको सडक शिलान्यास
आफूले मन पराएको केटीले आफूलाई मन पराउँछिन् वा पराउदिनन् ? यसरी जान्नुहोस्
बीच रोडमा आफ्नै प्रेमिकाको र एक गार्डको गोलि हानि हत्या पछी आफैले गरे आत्माहत्या